Ikhamera encinci yokuHlola-ikhamera efihlakeleyo yePenisile Ikhamera ye-170 Degree Wide Angle Lens (SPY018) | Izisombululo ze-OMG
Ikhamera ye-OMG Mini yokuHlola-efihliweyo yePocket pen Camera 170 Degree Wide Angle Lens (SPY018)
I-1080P yeyona Nqanaba elipheleleyo le-HD elipheleleyo leVidiyo yeVidiyo. I-1920x1080P kwi-30fps kunye ne-170 yedigri ephezulu yeelensi zokubamba umbono omkhulu ngexesha lokurekhoda. Kwaye ucoceko olubanzi lweWide Dynamic Range (WDR) inokuvelisa umfanekiso okanye ividiyo ebhetele kakhulu esekwe kwitekhnoloji efanayo ye-hd.
Ukuxhumeka kwe-Wi-Fi ne-View: Ukwakhiwa kwimodyuli ye-wifi kwenza umsebenzisi asebenzise ikhamera ngokusebenzisa ifowuni yeselula (i-Andriod okanye i-platform ye-iOS ehambelanayo), ulungele i-angle yokubukela yekhamera, ukusasaza bukhoma okanye ukuthatha iividiyo nge-Finalcam app.
Iifowuni ezininzi zokuLondoloza iDivayisi: Ukubhala ngokuzenzekelayo iividiyo okanye uthabathe iifoto usebenzisa ikhamera yesenzo; setha kwi-inkqubela ebonakalayo yokurekhoda ebonakalayo usebenzisa ikhamera yokhuseleko ekhaya okanye qalisa umsebenzi wokurekhoda womculo usebenzisa i-dictaphone ngethuba lokudibanisa okanye ukurekhoda ividyo xa kufuneka.
Ibhetri ehlaziywayo: Yakhelwe kwi-560 mAh ibhetri etshayiweyo, ukurekhoda ixesha ukuya kwii-90 imizuzu, okanye ngaphezulu kweeyure ze-20 ukufakela ibhanki yamandla angaphandle yangaphandle ye-10000mah (ibhanki yamandla ayifakiwe). Ikhamera idinga ikhadi le-sd ukuze lisebenze.
Smart and Easy to Use: Ifomathi yeH264 yokunciphisa ukuqinisekisa i-video elula kakhulu. I-Loop Ukurekhoda ifakwe njenge-3 / 5 / 10 imizuzu yevidyo kliphu ngokufuna kwakho. Inkxaso kufike kwi-64GB ikhadi le-SD lemitha kunye ne-watermark yosuku / ixesha elungiswayo. Inkxaso ye-HDMI inokufumaneka (ikhampasi ye-microdidi kunye nekhebula le-HDMI ayifakiwe).
Ukurekhoda ngokuzenzekelayo iividiyo okanye uthathe iifoto usebenzisa njengekhamera yesenzo.
Ukusetyenzwa kwento yokukhangela esebenzayo isebenzisa ikhamera yokhuseleko ekhaya.
1920 x 1080P kwi-30fps kunye ne-170 idilesi enkulu ye-angle lens yokubamba inkulu xa ubhala.
Qalisa umsebenzi wokurekhoda womculo usebenzisa njenge-dictaphone ngexesha lokuhlangana okanye ukurekhoda ividyo yevidiyo xa kuyimfuneko.
Ukwakhiwa kwe-wifi module kwenza umsebenzisi asebenzise ikhamera ngokusebenzisa ifoni yeselula (i-Android okanye iOS platform).
I-watermark yosuku / i-watermark ilungiswayo.Iziphumo zeHDMI ziyafumaneka (ikhebula le-HDMI alifakiwe).
I-Loop Ukurekhoda iguqulelwe njenge-3 / 5 / 10 imizuzu yevidyo kliphu njengoko ufuna kwaye isekela ikhadi le-SDN ye-64GB (ikhadi le-SD lingabandakanyi).
I-WF92 eyakhiwe kwi-560 mAh ibhetri ehlawulelwayo, ukurekhoda ngesandla ukuya kwii-90 imizuzu, okanye ngaphezulu kweeyure ze-20 ukufakela ibhanki yamandla angaphandle yangaphandle ye-10000mah (ibhanki yamandla ayifakiwe).
I-HD epheleleyo Igadiweyo i-Spy Camera:
1920x1080p ikhamera efihlakeleyo ye-spy, elula ukuyifumana kunye nokusetyenziswa okuphathekayo.
Umsebenzi weWifi Ufakwe:
Ngokudibanisa iWifi ulungelelanisa i-angle yekhamera, ukuhamba ngokusasaza okanye ukuthatha iividiyo nge-Appcam ye-Finalcam.
Ibhetri etshayiweyo ekwakhiwe kuyo:
Eyakhelwe kwi-560 mAh ibhetri etshayiweyo, ukurekhoda ngesandla ukuya kumzuzu we-90.
Ubukhulu bomkhiqizo: 4.5 x 1 x 0.6 intshi
Into yobunzima: I-1.8 ounces
I-SPY018-Efihliweyo yePocket Pen Camera Camera
13909 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-3 Namhlanje